165 mamirioni vanyoreri ane Spotify | Ndinobva mac
Ipo Apple yapedza anopfuura makore maviri smukugadzirisa huwandu hwevanyori veyako mimhanzi yekushambadzira sevhisi, Apple Music, kambani yeSweden Spotify inoramba ichiwedzera huwandu hwevashandisi, zvese zvemahara vhezheni uye iyo yakabhadharwa vhezheni. Sekureva kwenhamba dzichangoburwa dzakaziviswa nekambani, huwandu hwevano bhadhara vanosvika mamirioni zana nemashanu.
Kana kune avo vane mamirioni zana nemazana zana nemakumi manomwe vabhadhare, isu tinowedzera mamirioni mazana maviri evashandisi veiyo yemahara vhezheni, tinoona mashandiro anoita chikuva cheSweden 365 mamirioni emwedzi anoshanda mushandisi base, iyo inomiririra kuwedzera kwe22% zvichienzaniswa nenguva yakafanana yegore rapfuura.
Spotify yakawana mumwedzi mitatu yekupedzisira, Mamirioni manomwe vatsva vanobhadhara vatsva, kubva pamamirioni gumi neshanu avaive nawo munaKurume 158 kusvika 31 miriyoni kubva munaJune 165, 31. Kuwedzera kwevanyori vanobhadharwa kwakawedzera ne2021% zvichienzaniswa nenguva imwecheteyo gore rapfuura.
Sekureva kwekambani, parizvino ine zvinopfuura 3 mamirioni podcast papuratifomu yayo, chikuva chiri kuwedzera kuve chakakosha uye icho chinobvumira iyo kambani kuve, mune ramangwana, sosi yemari ine yakakwira purofiti margin.
Pakati pevashandisi vaishandisa podcasts mukota yechipiri, mashandisiro emashandisirwo aive akasimba (kuwedzera kwe95% gore-ne-gore zvakazara uye anopfuura makumi matatu% pagore-pagore pamushandisi), nepo vhiki nevhiki uye pamwedzi yekuchengeta mitengo yakasvika-nguva yese kukwirira. Munguva yekota, mugove wepodcast mumaawa akazara ekushandisa papuratifomu yedu yakasvikawo pakakwirira-nguva dzese.
Spotify yakamisikidzwa Chinangwa chekusvika mazana emamirioni evashandisi vanoshanda pamwedzi pakupera kwegore rino. Pakati pevane mamirioni mazana vashandisi vanoshanda, anotarisira pakati pe400 ne177 kuve vanobhadhara vanyoreri. Kana isu tichifunga kuti yega yega kota iri kuwana pakati pe181 uye 7 miriyoni vanyori vatsva, Spotify yekukura kwekufungidzira ndeyechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » 165 mamirioni vanyoreri vane Spotify
Masiki zvakare anosungirwa muApple Chitoro muUnited States